सरकारले स्वागत गरेका अतिथि ! – Aajako Khabar
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी तेस्रो नेपाल भ्रमणको क्रममा आज नेपालमा छन् । शुक्रबार विशेष विमानबाट जनकपुर अवतरण गरेका मोदीले त्यहाँ नागरिक अभिनन्दन पनि थापे । सोही दिन काठमाडौँमा आए । शनिबार पशुपति दर्शन र मुक्तिनाथ दर्शनपछि अन्य राजनीतिक भेटघाटमा लाग्दैछन् र शनिबार नै स्वदेश फिर्ता जाँदैछन् ।
शुक्रबार जनकपुरमा मोदीको स्वागत गरिँदा समग्र नेपाल र नेपालीले अपमानित भएको महसुस गरे । प्रोटोकलअनुसार अर्को देशको सरकार प्रमुख नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा अवतरण गरेर राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखलाई भेटेर अर्थात् अनुमति लिएर अन्य प्रदेश, क्षेत्र वा स्थानमा सवारी हुनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । मोदी दिल्लीबाट सीधै जनकपुर झरे त्यसपछि मात्रै काठमाडौँ आए ।
जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन थापेका मोदीले जनकपुर क्षेत्रको विकासको लागि १ अर्ब रुपैया दिने घोषणा पनि गरे । अर्को देशको सरकार प्रमुखले केन्द्रीय सरकारको अनुमति विना यसरी प्रदेश सरकारलाई रकम दिन मिल्छ कि मिल्दैन त्यस विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ ।
मोदीको स्वागतकोलागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनकपुर नै पुगे । जानकी मन्दिर परिसरमा उनीहरुको भेट भयो । टाउकोमा गम्छा, पाइजामा र सुरुवाल लगाएर आएका मोदीको स्वागतका लागि पुगेका प्रधानमन्त्री ओली कुर्ता सुरुवालमा पुगे अर्थात् तराईबासीकै भेषमा पुगे । एउटा सरकार प्रमुखले नेपाली राष्ट्रिय पोषाक लगाएर जान नमिल्ने हो कि ? तराईको सम्मान वा अपमान गरेको यो के हो यस विषयमा पनि बहस चलेको छ । यसैगरी काठमाडौँमा नागरिक अभिनन्दन गरिरहँदा मोदी र ओलीको भेषभूषा एकै प्रकारको थियो । मोदीको सम्मान गरेको कि अपमान गरेको ? यो विषयमा पनि अहिले बहस चलिरहेको छ । अतिथिका अघि उसकैजस्तो पहिरन लगाएर उसकैजस्तो भाषा बोल्दै जाँदा सम्मान हुन्छ कि अपमान हुन्छ ? सामाजिक सञ्जालको बहसको विषय हो । अर्कोतर्फ घरमा बोलाएर आएको पाहुना पहिले हजुरबा-हजुरआमाकोमा जान्छ, ढोगभेट गर्छ कि तरुनी नातिनीसँग गएर अंकमाल गर्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कुरा उठाइएको छ ।
यता मोदीको सुरक्षार्थ भन्दै करिब ९० जनाको सैनिक टोली नेपाल भित्र्याइएको छ । यसले मोदीको सुरक्षा त भयो होला तर नेपालको बेइजत भयो भन्नेको संख्या पनि ठूलो छ । एउटा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा सुरक्षा दिन के नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी सक्षम थिएन ? के यी सुरक्षा निकाय नालायक हुन् ? यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा र विभागीय रुपमा पनि बहस चलिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ मोदीको नेपाल भ्रमणप्रति जनता खुसी देखिएका छैनन् । सरकारले जबरजस्ती मोदीलाई बोलाएर स्वागत गरेको अनुभूति भएको छ । जनताले २ वर्षअघि भारतले गरेको नाकाबन्दीको सम्झना गर्दै माफी माग्नु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । विरोध स्वरुप कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका छन्, पोष्टर र व्यानर प्रदर्शन गरेका छन् । तर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत हनन गर्दै पक्राउ गर्ने, पोष्टर व्यानर च्यात्ने जस्ता कार्य गरिरहेको छ । यो सरासर गलत छ ।
नेपालीले नाकाबन्दीको बेला पाएको पीडा अझै भुल्न सकेका छैनन् । भारत असल मित्र बन्न चाहन्छ भने कमसेकम भारतले माफी माग्नु पर्ने जनताको चाहना छ । यति गर्न नसक्दा पनि नेपाल सरकारले चाहिने जतिमात्रै सम्मान गर्नु पर्ने अपेक्षा जनताको छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जहाँ जान चाह्यो, जसरी जान चाह्यो, जहिले जान चाह्यो त्यसरी त्यसरी पठाउनु हुँदैन थ्यो । त्यो विषयमा सरकारले अडान राख्नु पथ्यो भन्ने जनताको माग छ । सरकारले नाकाबन्दीको कुरा उठाइ दियोस्, सीमा मिचिएको कुरा उठाइ दिओस्, नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा हुने अवरोध र अफ्ठ्याराका विषयमा कुरा उठाइ दिओस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ तर सरकार नागरिक अभिनन्दन गर्न, गार्ड अफ अनर्स प्रदान गर्न, काठमाडौँ महानगरपालिकाको साँचो हस्तान्तरण गर्न मात्रै आतुर भएको अर्थात जसरी हुन्छ मोदीलाई रिझाउन मात्रै लागेको देखिएको छ ।
नाकाबन्दीको बेला अलिकति भए पनि अडान लिएर राष्ट्रिवादी नेताको पहिचान बनाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोदी प्रति अहिले देखाएको व्यवहारले विपक्षि पार्टीका मात्र नभएर स्वयम् नेकपा एमालेका नेता, कार्यकर्ता पनि रुष्ट छन् । मोदीलाई जति स्पेश दिइएको छ त्यति दिन नहुने थियो भन्ने पक्षमा उनीहरु पनि छन् ।
त्यसैले सरकार भनेको जनता हो, जनताको भएजस्तो महसुस गर्दै, जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै अघि बढ्नु पर्नेमा लम्पसारवादी भएको आरोप लागेको छ । जनटाले आफ्नो छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री नेपाल आएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । पहिले पटक मोदी नेपाल आउँदा जसरी नेपालीले दिलबाट स्वागत गरेका थिए त्यसरी नै यो पटक पनि स्वागत गर्न चाहन्थे तर त्यो अवसर पाएका छैनन् । त्यसैले यो पटकको मोदीको स्वागत नेपाली जनताको नभएर केपी ओली सरकारको मात्रै भएको अनुभूति जनताले गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०७५, शनिबार ०९:५२ 2018-05-13 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged ओली मोदी स्वागत
प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भेटवार्ता
२९ बैशाख २०७५, शनिबार १९:५४ 2018-05-12
६ बैशाख २०७५, बिहीबार १३:२८ 2018-04-19
९ बैशाख २०७५, आईतवार १३:५६ 2018-04-22
Tags: ओली, मोदी, स्वागत